नयाँ पुस्तक भन्छ: मानिस झूटको पुलिन्दा हो - विचार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नयाँ पुस्तक भन्छ: मानिस झूटको पुलिन्दा हो
उत्तमबाबु श्रेष्ठ साउन २५
पोर्न साइटमा महिलालाई प्रताडित गरेर सम्पर्क गरिएको भिडियो, बलात्कृत भिडियोको खोजी महिलाहरुले उल्लेख्य संख्यामा गर्दछन्। त्यस्ता भिडियो महिलाले नै किन हेर्न खोज्छन् मानवीय झुटको यो मनोवैज्ञानिक पक्ष आश्चर्यजनक छ।
आवश्यकता अनुसार श्रीमती, श्रीमान्, साथी, हाकिम, छोराछोरी, बुबाआमा र डाक्टरसँग झूट बोल्ने मानिसले डिजिटल यूगमा एउटा ठाउँमा मात्रै सत्य कुरा बोल्दछ। त्यो कहाँ होला?
मानिसले पलपलमा झुट बोलिरहेको हुन्छ। आफूले किनेको जुत्ताको मुल्यदेखि गर्दै नगरेको जिमसम्म, पढेको पुस्तकदेखि पिएको रक्सीसम्म। स्वास्थ्य भए पनि बिरामी थिएँ भनेर, सम्पर्कमा रहन्छु भन्दै बेपत्ता भएर, दुःखमा पनि खुशीको अभिनय गरेर, मनमा नश्लवाद/जातिवाद भए तापनि बाहिर नदेखाएर, समलिंगीप्रतिको आकर्षण लुकाएर, रोग भए तापनि निरोगी छु भन्दै हामी ढाँटिरहेका हुन्छौं। श्रीमतीसँग, श्रीमानसँग, साथीसँग, हाकिमसँग, छोराछोरीसँग, बुबाआमासँग, डाक्टरसँग, अनि विभिन्न सर्वेक्षणहरुसँग र सायद आफैसँग पनि मान्छेले झूट बोलिरहेको हुन्छ। तर इन्टरनेटको यो युगमा मान्छेले एउटा मात्रै ठाउँमा सत्य बोल्दछ। जहाँ उसले आफूलाई भएको, आफूले चाहेको, गरेको, मनलागेको अति गोप्य स्वभाव, आनीबानी, आचरण र रोग सबै खोल्दछ। त्यो ठाउँ अर्थात संसारमा सबैभन्दा बढी हेरिने एक वेबपेज बीचमा भएको आयताकार कोठा— जसलाई हामी गुगल नामले चिन्दछौं।
अरुसँग झुटो बोल्दा लाभ हुनसक्छ तर गुगलसँग झुट बोलेमा आफूले खोजेको भन्दा भिन्न कुरा पाउने भएकोले त्यो चार इन्च लामो बक्समा मानिसले सत्य कुरा टाइप गर्न बाध्य हुन्छ बदलामा आफूले चाहे वा खोजे अनूरुप सूचना प्राप्त गर्दछ। गुगलसँग मानिसले बाँच्न मन नलाग्दा आत्महत्या गर्ने तरिकादेखि रोग लाग्दा निदानको उपायसम्म, कुनै जाति विशेषलाई होच्याउने जोकदेखि यौन चलचित्रको भोकसम्म, गर्भवती हुने तरिकादेखि गर्भपतन गर्ने उपायसम्म, घुम्नजाने ठाउँदेखि बस्ने होटलसम्म, प्लेन टिकटदेखि ट्याक्सीको भाडासम्म, किताबदेखि रक्सीको समीक्षासम्म के मात्रै खोज्दैन्। जब धेरै मानिसहरुले उही शब्द वा वाक्य गुगलमा खोज्न थाल्दछन्, दोहरिएका त्यस्ता लाखौं शब्दहरुको कोलाहलबाट एउटा बुझिने स्वर निस्कन्छ। मानिसहरुले गुगल, फेसबुक, पोर्नहब (सबैभन्दा धेरै हेरिने पोर्नसाइट) र विकिपेडिया लगायतका विभिन्न वेबपेजहरुमा क्रमशः खोजेका, पोष्ट गरेका, हेरेका र अपलोड गरेका कुराहरुबाट अहिलेको संसारलाई चियाउन खोजेका छन्, अमेरिकी लेखक सेथ स्टेफेन डेभिडोभिचका अनुसार।
उनको सन् २०१७ मा प्रकाशित गैह्रआख्यान ‘एभ्रिबडी लाइजः बिग डेटा, न्यू डेटा, एन्ड ह्वाट इन्टरनेट क्यान टेल अस अवाउट हू उइ रियल्ली आर?’ मानवीय झुटको संसारलाई पर्दाफास गर्ने एउटा प्रयत्न हो। यो लेख इकोनोमिष्ट लगायतका पत्रिकाहरुले वर्ष पुस्तकको उपमा दिएको, न्यूयोर्क टाइम्समा 'वेस्ट सेलर' भएको साेही पुस्तकको समिक्षा हो।
परिचय बाहेक तीन भागमा विभाजित ३५२ पृष्ठको पुस्तकमा सेथले जल्दोबल्दो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक लगायत यौन, खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा र पत्रकारितासँग सम्बन्धित प्रश्नहरु—अमेरिकाभर समलिंगीको संख्या कति छ, शेयर बजारलाई जित्न सकिन्छ, कसले ट्याक्स छलि गर्छन्, के मिडिया पूर्वाग्रही हुन्छ, कुन शहर बच्चा हुर्काउनका लागि उपयुक्त छ, के कुरा भाइरल हुन्छ जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेका छन्। लेखकले थुप्रै स्थापित मान्यताहरुलाई नयाँ तथ्यांकको माध्यमले भत्काइदिएका छन्। उनले अमेरिकाको नाभीमा गढेको जातिवादले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पारेको असरदेखि भारतमा गर्भवती महिलाले इन्टरनेटमा खोज्ने भित्री कुरासम्म खोतलेका छन्। एउटा विल्कुल नयाँ तथ्यांकको स्रोत अर्थात इन्टरनेटमा खोजी गरिएका शब्दहरुबाट बनेका तथ्यांक मार्फत जसलाई हिजोआज चल्तीको भाषामा बिग डेटा (विशाल तथ्यांक) पनि भनिन्छ।
पुस्तकमा अमेरिकाको उदाहरण धेरै प्रयोग गरिएको भए तापनि उनले प्रयोग गरेका सामाग्री र विधिहरु संसारभरका लागि काम लाग्नेछन्। यस्तो लाग्छ लेखकले पुस्तकमा विशाल तथ्यांकको महासागरबाट उठाएको एकमुठी पानीको मात्रै विश्लेषण गरेका छन्, त्यस्ता विशाल तथ्यांक विश्लेषणको अथाह संभावनाको ढोका खोलेर। किनभने गुगल खोजीमा संकलित तर निशुल्क र खुल्ला रुपमा उपलब्ध तथ्यांक मानव इतिहासको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा अथाह तथ्यांकको स्रोत हो। जसको सचेत विश्लेषणबाट असंख्य प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न सकिन्छ।
पुस्तक कतिलाई विशाल तथ्यांक भन्ने परिचयबाट शुरु हुन्छ। जहाँ लेखकले तथ्यांक भनेको संख्यामात्रै होइन, व्यक्तिगत अनुभव पनि हो जसले कुनै कुराको निर्णय गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने प्रष्ट पारेका छन्। परिचयात्मक भागमा अनुसन्धानमा समेटिएका केही उदारणीय विषयहरुलाई टिपेर तथ्यांक विज्ञानको नालिबेली केलाएका छन्, सरल र सहज भाषामा।
पुस्तकको दोश्रो भाग जुन पाँच अंशमा बाँडिएको छ, पहिलो अंशमा लेखकले विशाल तथ्यांकको शक्तिको बारेमा शब्द खर्चेका छन् भने दोश्रो अंशमा फ्रायडले सत्य भनेका थिए भन्ने यौन मनोवैज्ञानिक प्रश्नलाई उधिनेका छन्। तेश्रो अंशमा लेखकले शरीर, शब्द र तस्वीरलाई तथ्यांकको स्रोत मानेर विभिन्न रोचक उदाहरण पेश गरेका छन्। ‘अमेरिकन परोहा’ नामको अमेरिकी विलक्षण घोडाको शरिरका अंगहरु केलाएर त्यस घोडामा त्यस्तो के थियो जसले उसलाई अमेरिकाको घोडादौड प्रतियोगिताको चारवटै उपाधी जित्ने संसारको पहिलो र एकमात्र घोडा बनायो, ऐतिहासिक पुस्तकहरुमा लेखिएका शब्दका आधारमा पिज्जा र ससेज कहिलेदेखि धेरै लोकप्रिय बन्यो, हाइस्कूलका विद्यार्थीहरुको हजारौं तस्वीरमा आधारित भएर मानिसहरु कहिलेदेखि फोटो खिच्दा मुस्कुराउन थाले जस्ता नसोचिएका तर रोचक प्रश्नहरुको उत्तर र कारण लेखकले खोतलेका छन्। चौथो अंश लामो र महत्वपूर्ण छ, जसमा डिजिटल सत्यको रस (डिजिटल ट्रुथ सेरम) को विश्लेषण छ। यसमा मानविय यौनको बारेमा, घृणा र पक्षधरताको बारेमा, इन्टरनेटको बारेमा, बालशोषण र गर्भपतनको बारेमा, फेसवुकका साथीको बारेमा र ग्राहकको बारेमा थुप्रै तथ्यांकहरु लेखकले पेश गरेका छन् । दोश्रो भागको पाँचौं अंश तथ्यांकको मिहिन विश्लेषणमा केन्द्रित छ जसले अमेरिकी शहर, नगर र गाँउका ढुकढुकी बताउँछ । दोश्रो भागको अन्तिम अंशमा इन्टरनेटको प्रयोगले बराक ओवामाले कसरी आफ्नो व्यक्तिगत वेभसाइटको डिजाइन गरेदेखि गुगल एड र फेसवुकले आफ्ना प्रायोगकर्ताहरु माझ गर्ने गोप्य इन्टरनेट सर्वेक्षणको विस्तृत कुरा छ।
पुस्तकको तेश्रो तथा अन्तिम भागको पहिको अंश विशाल तथ्यांकको सीमितताको वर्णनमा केन्द्रित छ। दोश्रो अंशमा विशाल तथ्यांकले धेरै संभावना मात्रै होइन, प्रसस्त चुनौती थपेको छ भन्दै उनले विशाल तथ्यांक प्रयोगले सरकार र ठूला कर्पोरेशनहरुको प्रभाव झनै बढ्ने र त्यसको खतराबारेमा औंलाएका छन्। अन्तिम भागलाई कति मानिसले यो किताब पूरै पढ्छन् भनेर चित्ताकर्षक ढंगले समापन गरिएको छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल पुस्तक भन्डार एम्याजोनको किन्डलमा पाठकले छोडेका पदचिन्हहरुको विश्लेषण गरेर मानिसले पुस्तकका अघिल्ला केही अंश पढ्ने र पूरै पढें भनेर झूट बोल्ने गरेको दलिल पेश गरेका छन्। लाग्छ, लेखकले पुस्तकको अन्त्यसम्म पनि पुस्तकको शीर्षक ‘हरेकले झूट बोल्छन्’ लाई सार्थक पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। तथ्यांक भन्छ, थोमस पिकेटीको बहुचर्चित पुस्तक ‘क्यापिटल अफ ट्वान्टी फष्ट सेन्चुरी’ जम्मा ३ प्रतिशतले मात्रै पूरै पढेका थिए भने नोवेल पुरस्कार विजेता ड्यानियल काहेमानको ‘थिंकिंग फास्ट एन्ड स्लो’ जम्मा ९ प्रतिशतले।
बलात्कारको भिडियो महिलाले किन हेर्छन्?
अमेरिकामा कालाहरुप्रति गरिने भेदभावको उन्मुलन भएको आधा शताब्दी भइसक्यो। त्यहाँ अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति पनि बनिसके तर त्यहाँको नाभि गढेको जातिवाद जस्ताको तस्तै छ, गुगल खोजीको तथ्यांकले यही देखाउँछ। त्यही जातिवादको वा स्वेत राष्ट्रवादको कारण बराक ओवामाले सोचेभन्दा कम भोट ल्याए (उनको ठाउँमा स्वेत उम्मेदवार हुन्थे भने उनले झन् बढी मत ल्याउँथे) भने डोनाल्ड ट्रम्पले जिते। जब अश्वेत राष्ट्रपतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्छन् तब गुगलमा कालाजाति लक्षित भद्दा जोक खोज्नेको संख्या बढ्ने गर्छ। बिडम्बना, जातीय भेदभावलाई उन्मुलन गर्ने आन्दोलनका नायक अश्वेत नेता मार्टिन लुथर किंगको जन्मजयन्तीको दिनमा कालामाथि गरिने भद्दा जोक अन्य दिनहरुमाभन्दा सरदर ३० प्रतिशत बढीले गुगलमा खोज्ने गर्छन्। बाइबल वा गड (भगवान) को खोजी चर्चमा प्राथना गर्ने दिन आइतबार बढी हुन्छ। विभिन्न जाती, समुदायहरुको पछाडि होच्याउने कस्ता विश्लेषण जोडिन्छ भन्ने कुरा गुगल सर्चले देखाउँछ। मुस्लिमलाई दुष्ट, कृश्चियनलाई मुर्ख, एसियनलाई कुरुप, अफ्रिकन अमेरिकनलाई अशिष्ट भन्दै मानिसहरुले गुगलमा खोज्दछन् तर बाहिर भने आफू जातिवादी नभएको दाबी गर्छन्।
यौनको कुरा मानिसले हत्पति खुलारुपमा गर्न चाहँदैनन् तर इन्टरनेटमा खोजिने यौनसम्बन्धी तथ्यांकले मानिसको झूटको पुलिन्दालाई छरपष्ट पारिदिन्छ। लेखकले प्रस्तुत गरेका यौनसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरु रोचक र मार्मिक मात्रै होइन, निराशाजनक छन्। अमेरिकीहरु इन्टरनेटमा मौषम भन्दा ज्यादा यौन खोज्छन्। त्यसो त भारत पनि कम छैन। लेखकको विधि प्रयोग गरेर मैले गरेको खोजको प्रारम्भिक तथ्यांकले नेपालमा इन्टरनेटमा यौनको खोजी झनै बढी भएको देखाउँछ। गुगल ट्रेन्डको विगत १२ महिनाको तथ्यांकअनुसार यौनजन्य भिडियो वेबसाइट पोर्नहवप्रति धेरै आकर्षण भएका मुलुकहरूमा विश्वभरमा नेपाल दोस्रो नम्बरमा छ। गुगल ट्रेन्ड सूचांकमा १०० भनेको धेरै आकर्षण र ० भनेको मापनको लागि पर्याप्त तथ्यांक नभएको मानिन्छ। हेर्नुहाेस् विवरण:
पाेर्नहब अधिक हेर्ने देशहरू माथिबाट तल
लेखक भन्छन्, भारत र बंगलादेशमा पतिले आफ्नो स्तनपान गर्न चाहेको कुरा अन्य देशको तुलनामा चौगुणा बढी खोजिन्छ। त्यसैगरी गर्भवती हुँदा यौनसम्पर्क गर्न हुने नहुनेको बारेमा गरिने गुगल खोजीमा पनि भारत अग्रिणीमा पर्छ। यौनका यस्ता थुप्रै नयाँ पुराना तथ्यहरु जुन मानिसले अरुसँग लुकाएका वा ढाँटेका हुन्छन्, त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिएका छन् लेखकले। धेरै पुरुषहरु आफ्नो जनइन्द्रियको साइजको बारेमा चिन्तित हुन्छन् (लेखकले पुस्तकको नाम नै मेरो लिंगको आकार कत्रो छ– राख्न खोजेका थिए, पछि सम्पादकको सल्लाहमा शीर्षक परिवर्तन गरिएको रहेछ)। जुन स्थापित कुरा हो, उनको तथ्यांकले त्यसलाई पुनःपुष्टि गरेको छ। तर पुरुषको तुलनामा महिलाहरु आफ्ना गोप्य यौनांगबारे चिन्तित हुँदैनन् भन्ने पुरानो मान्यतालाई उनको तथ्यांकले खारेज गरेको छ। उनका अनुसार, महिलाहरु विशेषत आफ्नो यौन अंगको गन्धबाट चिन्तित हुन्छन्, गुगल खोजीले त्यस्तै भन्छ। त्यसैगरी अमेरिकामा स्तन बढाउने सर्जरीबारेमा प्रतिवर्ष ७० लाख गुगल खोज गरिन्छ। पोर्न साइटमा महिलालाई प्रताडित गरेर सम्पर्क गरिएको भिडियो, बलात्कृत भिडियोको खोजी महिलाहरुले उल्लेख्य संख्यामा गर्दछन् भनेर लेखकले समाजको निराशाजनक पाटो सार्वजनिक गरिदिएका छन्। बलात्कार महिला हिंसाको चरम रुप हो। त्यस्ता भिडियो महिलाले नै किन हेर्न खोज्छन् मानवीय झुटको यो मनोवैज्ञानिक पक्ष आश्चर्यजनक छ।
मानिसको सामाजिक सन्जालमा गरिने पोष्ट र लाइक तथा उसको वास्तविक जीवन फरक हुने लेखकले तथ्यसहित प्रस्तुत गरेका छन्। जसको कारण राम्रो देखिने अभिलाषा (सोसल डिजायरिटी वायस) हो। सन्जालमा राम्रो देखिन मानिसले राम्रा राम्रा साइटहरु लाइक गर्ने, सेयर गर्ने तर इन्टरनेटमा भने नराम्रा कुराहरु पनि उत्तिकै पढ्ने लेखकको ठम्माई छ। उनी भन्छन्, जुन ठाउँमा फेसबुकमा आफ्ना पतिको बारेमा राम्रा कुराहरु (मलाई औधी माया गर्छ, असल छ आदि) को पोष्ट भएको हुन्छ, त्यही ठाउँमा आफ्नो पतिका नराम्रा कुराहरु (पतिलाई छुच्चो, कष्टप्रद, घटिया आदि) बारे गुगलमा बढी खोजिएकोे हुन्छ। बेरोजगारी बढ्यो भने बच्चाहरुलाई बाबुआमाले पिट्नेक्रम पनि बढ्ने कुरा गुगल खोजीको तथ्यांकले देखाउँछ। ‘मेरो अभिभावकले मलाई पिट्यो’ भन्ने गुगल खोजी अमेरिकामा आर्थिक मन्दी भएको बेला उत्कर्षमा पुगेको थियो। मानिसहरुले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा बाहिर राम्रो कुरा बताए तापनि गुगलमा सुखी दाम्पत्य (ह्याप्पी म्यारिज) भन्दा संभोगरहित दाम्पत्य (सेक्सलेस म्यारिज) धेरै खोजी हुने शब्दमा पर्दछ।
नेताहरुले कस्ता भाषण गर्दा ठिक हुन्छ?
त्यसो त निराशाजनक मात्रै होइन, अपराध नियन्त्रणलाई ठूला तथ्यांकको विश्लेषणले कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा लेखकले देखाएका छन्। महिलाले यौनांग गन्हाएको धेरै खोजी गरेको स्थान पत्ता लगाएर उनीहरुलाई आफ्नो यौनांग सरसफाइको बारेमा अभियान चलाउन सकिन्छ। गुगलमा खोजिने रोगहरुको लक्षणको आधारमा पनि त्यस्ता ठाउँहरुमा रोगको बारेमा जनचेतना अभियान चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै आत्महत्या कसरी गर्ने भन्ने गुगल खोजीको आधारमा त्यस्ता ठाउँ पत्ता लगाएर डिप्रेसनको बारेमा चेतना फैलाउन सकिन्छ। सरकारले कर छल्ने ठाउँ पत्ता लगाएर करछली गर्नेहरुलाई कारबाही थाल्न सक्छ। कमजोर शैक्षिक अवस्था भएका स्कूलहरुको स्थिती सुधारमा यस्ता विशाल तथ्यांकहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। समाजमा कुनै समुदाय वा जातिप्रतिको घृणालाई घटाउन नेताहरुले कस्ता कुरा भाषणमा समेट्दा ठीक हुन्छ भन्ने विवरण रोचक र उपयोगी छ।
पुस्तकमा तथ्यांकमा आधारित एउटा रमाइलो कुरा छ, जुन धेरैको व्यक्तिगत जीवनसँग मिल्दछ। जुन मानिसहरुले अरुसँग पैसा माग्दा ‘भगवान कसम’, ‘म जसरी पनि तिर्छु’ वा ‘मेरो आफन्त विरामी छ’ भन्ने शब्दहरु प्रयोग गरेर पैसा माग्छन् तिनीहरुले ऋण फिर्ता गर्ने संभावना न्यून हुन्छ। त्यसको विपरित आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाएर, व्याजको कुरा स्पष्टसँग गरेर पैसा माग्नेले ऋण तिर्ने संभावना बढी हुन्छ। अमेरिकालाई अवसरको मुलुक भनेपनि त्यहाँ अन्यत्र भन्दा कम अवसर छ भन्नेदेखि बोष्टनमा हुर्कने बच्चाहरुको बैज्ञानिक बन्ने संभावना किन अन्यत्र हुर्किएका बच्चाको भन्दा बढी हुन्छ, अश्वेत मध्यम परिवारमा जन्मिएको परिवारको केटाको कति उचाई भएमा उसले बास्केटवल खेलाडी बन्ने संभावना बढ्न सक्छ सम्मका थुप्रै रोचक कुराहरु छन् पुस्तकभित्र। इन्टरनेटले उपलब्ध गराउने तथ्यांकको विश्लेषणबाट लेखकले परम्परागत माध्यामले तथ्यांक संकलन गर्ने जस्तै सर्वेक्षण विधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्, कन्डोम प्रयोगको मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर। लेखकले सामाजिक विज्ञानमा सर्वाधिक प्रयोग हुने सर्वेक्षण जस्ता तथ्यांक संकलन विधि वा मनोविज्ञानमा प्रयोग गरिने अवलोकन विधिको आफ्नै महत्व भएता पनि डिटिजल यूगमा तथ्यांक संकलनको नयाँ विधिलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने सुझाएका छन्। उनका अनुसार मानिसले व्यक्तिगत विवरणहरु गोप्य राखिने सर्वेक्षणहरुमा पनि झुट बोलिरहेका हुन्छन्।
कतिपय हाम्रो मनमा भएका सुसुप्त कुराहरु गुगल सर्च वा त्यस्तै ठाउँहरुमा उजागार गरिरहेका हुन्छौं, त्यो कुरा हामीले बिर्सन्छौं वा वास्ता गर्दैनौं। उदाहरणका लागि यूट्यूबमा खोजेका भिडियोहरु, किन्डल जस्ता इलेक्ट्रोनिक बुक रिडरमा पढ्दा अन्डरलाइन गरेका कुराहरु। तर एल्गोरिदमले त्यसलाई सम्झने, विश्लेषण गर्ने र चाहेको बेला उपलब्ध गराइदिन गर्छ। गुगल वा किन्डल पनि त्यस्तै एल्गोरिदम हो। त्यसले हामीले खोजेका, पढेका, चाहेका, हेरेका सबै कुराको ‘शब्द कोलाहल’ जम्मा पारेर राख्दछ जसको विश्लेषणबाट मानिसको स्वभाव, आचरण, चाहना र मनोविज्ञान बुझ्ने ध्वनि निकाल्न सकिन्छ। पुस्तकमा यस्तै डिटिजल स्पेशमा भएका तथ्यांकहरु केलाएर, प्रविधि संसारको बहुचर्चित भनाई ‘हिजोआज मानिसले आफूले आफूलाई बुझेको भन्दा एल्गोरिदमले बढी उसलाई बुझ्दछ’ लाई पुष्टि गरिएको छ।
प्रकाशित २५ साउन २०७५, शुक्रबार | 2018-08-10 14:03:28
उत्तमबाबु श्रेष्ठ अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासेचुसेट्सबाट वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका अनुसन्धानकर्मी हुन्
उत्तमबाबु श्रेष्ठबाट थप
‘झ्याम्ली बाख्राको पाठो’ भेट्दा
पाठकले हाकाहाक्की ७८ लाख घुस लिएको प्रकरण तेसै थन्किन्छ त? लेनदेन भएको आफैँमा प्रस्ट छ। यस सम्बन्धमा अतिरिक्त सुझबुझको आवश्यकता छ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई वासिंगटनमा स्वागत र सम्मान दिएर पठाएको केही सातापछि नै काठमाडौंको सत्तारुढ दलबाट वाशिंगटनले यस्तो विज्ञप्तीको अपेक्षा...
‘के नेकपाले अहिले अंगिकार गरेकै सामाजिक रुपान्तरणको मोडेल कांग्रेसको मोडेल हो? हो भने यसको स्वामित्व दाबी गर्न किन सक्दैन कांग्रेस? हैन भने...
डा’साब तपाईं यतिवेला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। र, म पनि पत्रकार छैन। भन्नुस्, नेपालमा कुन तहसम्मको बाह्य हस्तक्षेप हुँदोरहेछ। भट्टराईले जुन...